UK oo qorsheyneysa inay jarto Gargaarka ay siiso Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
LONDON - Boqortooyada Ingiriiska, ayaa qorsheyneysa in ay yareyso saddex meelood laba meelood ka jarto gargaarka ay siiso dalalka ugu saboolsan Caalamka, oo Soomaaliya ay ku jirto, sida lagu sheegay dukumiinti sir ah.
Gargaarka Syria waxaa la dhimayaa 67%, gargaarka la siinayo Libya boqolkiiba 63%, Soomaaliya 60% iyo South Sudan 59% ayaa la jari doonaa, sida lagu sheegay warbixinta xafiiska arrimaha dibedda oo uu helay Website-ka Open Democracy.
Xisbiga Shaqaalaha UK, ayaa sheegay in dhimista gargaarka "ay sababi doonto burbur" soo gaara qaar ka mid ah dadka adduunka ugu nugul.
Preet Kaur Gill, xoghayaha horumarinta caalamiga, ayaa yiri: “Tani waa go’aan laga naxo, oo ku saabsan saameynta dhabta ah ee dunida ay ku yeelan karto, waa mowqif ku dhisan ujeedo siyaasadeed oo ku aaddan barnaamijkeeda gargaarka dibadda.”
Maxamuud Maxamed Xasan, agaasimaha Save the Children ee Soomaaliya, ayaa ka digay tallaabadan isagoo yiri: "Warbixinadan waa kuwo ka xun wixii aan ka baqeynay, haddii ay run tahayna, saameynta ay ku yeelaneyso carruurta waa wax aad u xun oo cawaaqib xun ka dhalan karta."
Dhaawaca dhaqaale ee ka dhashay COVID-19, ayaa horseeday in Dowladu ay hakiso balanqaadkeedii ahaa inay ku qarash gareyso 0.7% dakhliga qaranka gargaarka dibada, taasoo ka dhigeysa 0.5%.
Dukumiintiyada ay heshay Open Democracy waxay soo jeedinayaan in wadarta barnaamijka gargaarka bini'aadamnimada laga jarin doono 1.5 billion ilaa £ 900 million.
Xogtan ayaa soo baxday iyadoo in ka badan boqol hay’ado samafal oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska ay cambaareeyeen go’aanka Dowladda ee gargaarka looga jarayo Yemen iyo dalalka kale.
Boqortooyada UK ayaa balan qaaday ugu yaraan £ 87 milyan oo gargaar ah, taasoo ka hooseysa balanqaadkii ahaa million 160 milyan ee 2020 iyo £ 200 milyan sanadkii 2019.
Comments Topics: soomaaliya uk ukaid
News 17 January 2022 19:24